Oziọma nke ụbọchị Jenụwarị 19, 2021 na nkọwa nke Pope Francis | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Oziọma nke Jenụwarị 19, 2021 na nkọwa nke Pope Francis
Brothersmụnna m, Chineke abụghị onye ajọọ-omume ichefu ọrụ unu na afọ-ọma unu gosiri n’ebe aha ya dị, site n ’ọrụ ndị unu meworo ma ka na-enye ndị nsọ. Naanị ihe anyị chọrọ bụ ka onye ọ bụla n’ime unu gosi otu ụdị ịnụ ọkụ n’obi ahụ ka e wee mejupụta olile-anya ya ruo n’ọgwụgwụ, ka unu ghara ịdị umengwụ, kama bụrụ ndị na-e imomi ndị ahụ, jiri okwukwe na ntachi obi, bụrụ ndị nketa nke nkwa ndị ahụ.
N’ezie, mgbe Chineke kwere Abraham nkwa n’enweghi ike iji onye ka ya onwe ya swearụọ iyi, o ji onwe ya ,ụọ iyi, sị: “M ga-agọzi gị ngọzi ọ bụla ma mee ka mkpụrụ gị baa ụba nke ukwuu”. Ntem ke Abraham ama ọkọbọ se ẹken̄wọn̄ọde ẹnọ enye. Mụ nwoke na-a byụ iyi karịa onwe ha, ha andụrụ iyi bụ nkwa nke na-eme ka esemokwu niile kwụsị.
Ya mere, Chineke, n’ịchọ igosipụta ndị nketa nke nkwa ahụ n’ụzọ doro anya na enweghị ike ịgbanwe agbanwe nke mkpebi ya, jiri aka ya thatụọ iyi, nke mere na, site n’omume abụọ a na-apụghị ịgbanwe agbanwe, nke Chineke na-agaghị ekwe omume ịgha ụgha n’ime ya, anyị, ndị gbabaworo n’ime Ya, nwere agbamume siri ike ijidesi ike na olile anya nke enyere anyị. N'ezie, n'ime ya anyị nwere arịlịka doro anya ma sie ike maka ndụ anyị: ọ na-abanye ọbụna karịa ákwà mgbochi nke ebe nsọ ahụ, ebe Jizọs banyere dị ka ihe butere anyị ụzọ, onye ghọrọ nnukwu onye nchụaja ruo mgbe ebighị ebi dị ka usoro Melkizedek si dị.
Mkp 2,23: 28-XNUMX
N’oge ahụ, n’ụbọchị izu ike, Jizọs na-agagharị n’etiti ọka wit na ndị na-eso ụzọ ya, ka ha na-aga, na-amalite ịkacha ọka.
Ndị Farisii gwara ya, sị: «Lee! Gini mere ha ji eme Satọde ihe na-adabaghị n'iwu? ». Ọ si ha, Didnu agughi ihe Devid mere mb hee ọ nọ na nkpà, agu we gua ya na ndi-ibe-ya? N’okpuru nnukwu onye nchụ-aja Abaiata, ọ banyere n’ụlọ Chineke ma rie ogbe achịcha, nke iwu akwadoghị iri ma e wezuga ndị ụkọchukwu, ma nyekwa ndị ibe ya ụfọdụ?
O wee sị ha: «E mere Sabbathbọchị Izu Ike maka mmadụ, ọ bụghị mmadụ maka ụbọchị izu ike! Ya mere Nwa nke mmadu buru kwa Onye nwe ubochi izu ike ».
Wayzọ ndụ a nke iwu rapara nye ha n'ịhụnanya na ikpe ziri ezi. Ha lekọtara iwu ahụ anya, ha leghaara ikpe ziri ezi anya. Ha lekọtara iwu anya, ha leghaara ịhụnanya anya. Nke a bụ ụzọ nke Jizọs na-akuziri anyị, na-emegide nke ndị dibia bekee. Zọ a si n’ịhụnanya rue ikpe ziri ezi na-eduga na Chineke, kama, ụzọ nke ọzọ, ịbụ nke a na-ekegide naanị na iwu, n’akwụkwọ ozi nke iwu, na-eduga na mmechi, na-eduga na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị. Uzo nke gaghari site na ihunanya rue na ihe omuma na nghota, rue na mmezu zuru oke, na-eduga na idi nso, nzoputa, na nzute anyi na Jisos Kama nke a, uzo a na-eduga na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, na nganga nke inwe ezi uche, na idi nso ahu na nhoputa. anya, nri? (Santa Marta - 31 Ọktọba 2014
5 ndụ ihe mmụta na-amụta site Jesus
Gini bu akara nke Oriri Nsọ? ihe ha pụtara?
Gịnị ka Baịbụl kwuru gbasara ịgbaghara ndị kwara iko?
Okwukwe Ndị Kraịst - Gịnị Bụ Mgbaghara?
Chọọchị: nrọ abụghị premonitory
Kedụ ka m ga-esi aza ekpere m?